Sida loogu duubo fiidiyowyo kafiican 7dan khiyaano ee loogu talagalay Galaxy S10 + | Androidsis
7 khiyaanooyin ah si loogu duubo fiidiyowyo fiican Samsung Galaxy S10 Plus
Waan ku barnaa 7 tabaha oo lagu duubo fiidiyowyo fiican Samsung Galaxy S10 + taasina waxay kuu oggolaaneysaa inaad si buuxda uga faa’iideysato barnaamijka kaamirada iyo saddexda muraayadaha ee taleefankan weyn ee Android.
Tabaha si aad u awoodid isticmaal dhammaan saddexda muraayadaha inta aad wax duubeysid ama la soco diirad otomaatig ah shay ama qof dhaqaaqaya. Tabaha kaas oo siinaya baalal taleefankaaga cusub ee sameeya shaqo weyn markay tahay fiidiyowga.
1 U isticmaal 3 muraayadaha indhaha sida kugu habboon
2 Dhaqdhaqaaqa autofocus si aad u raacdo qof ama shay
3 Autofocus meel bannaan oo kooban oo ah muuqaalka kore
4 Habka Super Steady inta duuban
5 Si fudud ugu duub GIF-yada firfircoon ee leh Galaxy S10 +
6 Habka fiidiyowga ee 'Instagram'
U isticmaal 3 muraayadaha indhaha sida kugu habboon
Galaxy S10 + waa xaddidan siyaabo qaar markii la tooganayo fiidiyowyada. Sidaad ogtahay, waxaan leenahay seddex lenses: telephoto, xagal caadi ah iyo balaaran. Waxa dhacaya ayaa ah in seddexdaan muraayadaha indhaha la heli karo oo keliya markaan fiidiyowyada ka duubeyno 30FPS. Taasi waa, haddii aan isticmaalno 60 FPS (wareegsan ilbiriqsi kasta), astaamaha mid kasta oo muraayadaha indhaha ka mid ah lama dhaqaajin doono.
Si aad u dhaqaajiso:
Waxaan dooranaynaa hab kasta oo xallin oo aan ahayn 60FPS labadaba UHD iyo FHD.
Dhaqdhaqaaqa autofocus si aad u raacdo qof ama shay
Isticmaalidda autofocus si aan ula socono shay / qof ayaa noo oggolaanaya inaan xoogaa wax qabanno waxyeellooyin cillad weyn. Waxay sidoo kale u adeegtaa daqiiqadahaas markaan dooneyno inaan raacno wiilkayaga oo diiradda la saaro qeexitaankiisa had iyo jeer isaga ayaa saaran.
Waxaan dhaqaajineynaa Raadinta tooska ah ee otomaatiga ah.
Xusuusnow in doorashadan kaliya waxaa laga heli karaa qaabka FHD oo ah 30 FPS. Haddii aad doorato FHD 60FPS, UHD ama UHD 60FPS wuu curyaami doonaa.
Autofocus meel bannaan oo kooban oo ah muuqaalka kore
Marka laga reebo dhaqaajinta diiradda otomaatiga ah si loo raaco qof ama shay, waxaan dhaqaajin karnaa qaabkan meel gaar ah oo ku yaal xayndaabka waxa aan qabaneyno. Taasi waa, shay kasta oo ka muuqda meeshaas xaddidan ayaa ka muuqan doona diiradda.
Waxaan siinaa si aan u duubo fiidiyowga.
Waxaan riixnaa qaybtaas shaashadda ah ee aan rabno inaan diiradda saarno had iyo jeer.
Dhinaca bidix waxaan ku arki doonaa astaan ​​nooga digaya in qaabkii si toos ah diirada loogu saaray aaggaas la hawlgeliyey.
Inaad karti u yeelato in aad farto dhagsii meel kale shaashadda.
Habka Super Steady inta duuban
Mid kale oo ka mid ah astaamaha cajiibka ah ee Samsung Galaxy S10 waa awoodda loo adeegsado habka 'Super Steady mode' si xitaa dhaqdhaqaaqyada kamaradaha degdegga ah shaqada xasilinta hab yaab leh.
Khasaaraha kaliya ee qaabkani waa in kaliya waa la hawlgeliyaa markaan isticmaalno mid ka mid ah qaraarada 30FPS. Taasi waa, waad iloobi kartaa inaad u isticmaasho qaabka 60 FPS UHD ama FHD.
Ka shaqeysiintu way fududahay:
Daawade vwaxaan nahay astaanta gacanta.
Waanu riixnaa oo qaabka 'Super Steady' ayaa la hawlgelin doonaa, kaas oo beddeli doona xallinta haddii uu ka mid noqon lahaa 60FPS.
Si fudud ugu duub GIF-yada firfircoon ee leh Galaxy S10 +
Waxaan duubi karnaa GIF-yada dhaqdhaqaaqa leh qaab fudud mahadsanid taleefankeena. Waxa kaliya ee ay tahay inaan ku laabano qaabka sawirka si aan u awoodno inaan u dhaqaajino oo markaa aan ula wadaagno kuwa GIF-yada ah ee aan ku sameynay kamaraddeena moobiilka.
Aynu aadno qaabka sawir ee barnaamijka kamaradda.
Waxaan aadeynaa Goobaha> Kiciye kiciye
Waxaan doorannaa habka GIF
Waan soo laabaneynaa barta aragtida ah oo ku hay badhanka santuuqa si aad u duubto GIF-ga firfircoon.
Waan dhameynay waxaanna ku diyaarin doonaa shaashadda si aan ula wadaagno shabakadaha ama barnaamijyada farriimaha.
Habka fiidiyowga ee 'Instagram'
Mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan ku haysanno barnaamijka kamaradda Galaxy S10 waa Habka gaarka ah ee 'Instagram'. Marka laga reebo inaad noo isticmaasho inaan sawirro ka qaadno, halka ay runti ka muuqato waa sheekooyinka Instagram.
Fudud, haddii aan tagno barnaamijka 'Instagram' oo aan duubno fiidiyoow sheekooyinka 'Instagram', markii aan ballaarinayno waxa uu barnaamijka Instagram sameeyo ayaa kordhinaysa xallinta, taas oo tayada video ayaa sii xumaatay. Tan awgeed waxaan u adeegsan karnaa qaabka Instagram ee barnaamijka kamaradda kaas oo noo oggolaan doona inaan adeegsanno mid ka mid ah saddexda muraayadaha indhaha.
Waxaan ula jeedaa, waxaan isticmaali karnaa qaabka telephoto, qaabka caadiga ah iyo xagal ballaaran si aad u sameysid Sheekooyin Cajiib ah oo Instagram leh dhammaan tayada iyo xallinta uu Samsung Galaxy S10 noo oggolaado.
Waxaan aadeynaa Instagram Mode.
Guji santuuqa ka dib markii uu doortay xagal ballaadhan
Waxaan duubnay Sheekooyinka Instagram.
Waan sii daynay, iyo waxaan toos u aadi doonnaa barta Instagram laga bilaabo barnaamijka kaamirada.
7 tabaha lagu duubo fiidiyowyo kafiican Samsung Galaxy S10 iyo inay kuu imaan doonaan raaxo xagaaga xagaaga oo nalagu soo tuuro. Ha ka maqnaan fiidiyowgan kale tabaha ugu fiican ee Galaxy S10 ama kani inuu ku tuso sida loo isticmaalo ku-dallaca wireless-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » 7 khiyaanooyin ah si loogu duubo fiidiyowyo fiican Samsung Galaxy S10 Plus
WhatsApp ayaa tirtira laba milyan oo akoonno been abuur ah bishii
Pliq: Epic Clash waa kala duwanaansho xiiso leh oo waligeed ahayd Tetris